Akụkọ - Nyocha banyere Ọnọdụ na Ọganihu Ugbu A nke Industrylọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Electric
Nyocha gbasara ọnọdụ na mmepe nke ugbu a nke ụlọ ọrụ eletriki eletriki
Site na mmepe nke ijikọ ụwa ọnụ na mmepe ngwa ngwa nke ngwa ọrụ ike, powerntanetị agbanweela usoro azụmaahịa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ọdịnala kemgbe ọtụtụ afọ. Dị ka ụlọ ọrụ ọdịnala, akụrụngwa ike ga-anakwere ịntanetị ịma aka. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ngwa ọrụ ike na-anabata ahịa e-commerce iji gbanahụ mmetụta na-emebi emebi nke ụdị azụmaahịa. Maka ugbu a, nnukwu ụlọ ọrụ ngwa ọrụ anaghị enwe obi ụtọ ka ọ bụrụ akụkụ abụba nke ịzụ ahịa e-commerce.
Nowdays Egwuregwu eletriki e-agbanwe ahịa e-commerce na china nwere ike ịhụ ebe niile, na mmalite afọ site na ntọala nke ikpo okwu e-commerce nke aka ha, n'ihi na ike mmadụ, isi obodo dị oke elu, na enweghị ike iru eruba a na-atụ anya ya, malitere ka ejiri nwayọ hapụ ya, ugbu a ọkachasị na ebe ndị ọzọ B2C e-commerce nke atọ, dịka Tmall, JingDong, Su Ning, Amazon na ihe ndị ọzọ. Uru nke ịbanye n'ahịa ahia e-commerce dị n'ụzọ nke ngwaọrụ eletriki site na tontanetị iji gbanwee mmepụta ha, njikwa, ahịa na njikọ ndị ọzọ, nke mere na ụlọ ọrụ ndị na-ere ọkụ na obere na-ajụ iji nweta ohere ndị ọzọ, ọdịnihu aka ha.
Kedu ihe ga-eme n’ọdịnihu nke ngwa ọrụ ike?
1. dịka otu n'ime ngwa ngwa eji arụ ọrụ, enwere ike ịchọta ngwaọrụ eletriki ebe niile, dị ka igwe ọkụ eletrik, chainsaw, igwe ịchacha ihe, igwe grinder na wdg. a na-ejikarị ya, gụnyere ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ igwe, ihe ịchọ mma nke ụlọ, nhazi ala, nhazi osisi, nhazi ego na ihe ndị ọzọ, nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Dị ka mba kachasị na-emepe emepe na China, a na-ekewa ngwá ọrụ eletrik dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu.
2. echiche nke ịzụ ahịa n'ịntanetị abụrụla nke gbanyere mkpọrọgwụ n'obi ndị mmadụ, ngwa ọrụ ike nwere ahịa ahịa e-commerce, ga-abawanye ngwaahịa ngwaahịa, na-agakwaghị enwe ahịa mpaghara, n'otu oge ahụ, mmata nke ụlọ ọrụ ga- Ọzọkwa meziwanye, mwepụta nke nyiwe nke atọ.
3. na-erite uru site na nzụlite nke teknụzụ lithium, a na-eji nwayọ tụgharịa akụrụngwa eletriki na inye ike ọkụ dị ọcha, ikike batrị na nchekwa nke ngwa ọrụ eletrik ga-akawanye mma nke ukwuu, ụgwọ batrị na-ebelata mgbe niile. Site na mmụba nke ọnụ ọgụgụ na-ewu ewu n'ime ezinụlọ, ngwaọrụ eletriki kwesịrị ịmalite ọtụtụ ojiji, ọganihu nke teknụzụ njikwa teknụzụ, ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi n'ime ezinụlọ, ikike mmepe ụlọ ọrụ buru ibu.